Apple-Ndivela kwaMac | Ndivela eMac (Iphepha 16)
I-Apple Pay ifika ePoland kunye nezinto ezisi-8 ezibhaliswe kwisicwangciso
I-Apple Pay ifika ePoland, apho ukuya kuthi ga kumashishini ayi-8 ahambelana nesivumelwano neApple sokuhlawula ngezixhobo zeApple.
UTim Cook undwendwela iAmsterdam ukuya kutyelela umfoti uAnnet de Graaf
Intloko ye-Apple, uTim Cook, uchithe impelaveki eAmsterdam.
Utshintsho kwiiMveliso ezihlaziyiweyo zeApple?
Kubonakala ngathi uluhlu lweemveliso ezihlaziyiweyo nezalungiswe yiApple luyaqhubeka notshintsho oluthile okanye ...
I-HomePod ngoku iyafumaneka eFrance, Germany nase Canada
I-HomePod ye-Apple ngoku iyafumaneka eYurophu, ngakumbi eFrance naseJamani ngee-euro ezingama-349, ixabiso elifanayo nelaseMelika.
Umboniso owaziwayo u-Oprah Winfrey, utyikityo lokuphucula umxholo we-Apple
Umbonisi owaziwayo u-Oprah Winfrey, kunye nenkampani yaseCupertino batyikitye isivumelwano sokunyusa nokuphucula umxholo ...
Enye yeenjineli ezibalulekileyo zeWaymo, iya kuApple
Omnye wabantu ababaluleke kakhulu kuphuhliso lwezithuthi zikaGoogle ezizimeleyo, utyikitye kwiApple ngeprojekthi yayo yezithuthi ezimeleyo.
IMacOS ePhakamileyo yeSierra 10.13.6 Beta, ukufikeleleka, iMicrosoft Office 2019, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Le ibiyiveki ezolileyo ngokweendaba ezivela kuApple kwaye yile ...
Isipili esine-smart esivela ku-Apple, ipatent entsha eza kukhanya
Ipatent entsha ye-Apple iyavela kwindawo. Nangona kunjalo, yikholelwe okanye ayiyiyo ...
Iingxowa zikaRapha Mac ngoku ziyafumaneka kwiVenkile yeApple
Ivenkile yeApple iqala ukuthengisa ubhaka kunye neebhegi zomyalezo zeMac kunye ne-iPad, eyilelwe ukuqhuba ibhayisikile.
IApple inomdla kumalungelo kwifilimu yoopopayi yeprojekthi yayo ye-audiovisual
UApple anganomdla wokufumana amalungelo kwifilimu yoopopayi evela kwisitudiyo saseIreland. Amahemuhemu avela kuMark Gurman
Izithethi zoTyikityo zaseLibratone ziya kuVuselelwa ukuze zidlalwe 2 ziyahambelana ngoSeptemba
ILibratone isandula ukubhengeza ukungqinelana kwezithethi zayo kunye netekhnoloji yokudlulisa ngaphandle kwamacingo kunye nevidiyo.
Obu sesichengeni senkqubo entsha ye-Intel ebizwa ngokuba yiLazyFP
Ukuba semngciphekweni kweeprosesa ze-Intel kuchaphazela ulwazi oluhlala luprosesa emva kokwenza izinto ezininzi. Ibizwa ngokuba yiLazyFP
I-Snitch encinci ihlaziywa kuhlobo lwe-4.1 kwaye iza nezinto ezintsha
I-Snitch encinci ihlaziyiwe kuhlobo lwe-4.1 kunye nenoveli yokukwazi ukwabelana ngemithetho yakho kunye neefilitha nabanye abasebenzisi besicelo.
I-rumor entsha ibeka ukumiselwa kwesiseko se-AirPower ngo-Septemba
Asicacanga ukuba kunjalo kwaye ukuba kuyinyani iya kuba yimveliso ethiwe thaca ...
Kwiveki enye emva kokuphehlelelwa kwe-beta yokuqala yazo zonke iinkqubo ezintsha ze-Apple ngoSeptemba, sikubonisa umbono wokuqala
Zonke iidesika eApple Park zezokusetyenziswa okumiyo; ukuhlala akuphilanga
% Iinkcukacha ezithe kratya zikhutshiwe malunga nokuba iidesika ziya kusetyenziswa ngabasebenzi eApple Park. Kwaye ngokucacileyo bonke baya kusebenza bemi.
Imvelaphi entsha engeyiyo engekho semthethweni yemacOS Mojave
Imvelaphi yokuqala ye-macOS Mojave eguqukayo iyavela. Ukuqikelela, siza kubona imali ngakumbi nangakumbi njengoko kuboniswa ngendlela ye-MacOS Mojave
I-Apple inokuvula iVenkile yayo yokuqala ye-Apple kwa-Israyeli
Ivenkile yokuqala ye-Apple kwa-Israyeli iyakubona ukukhanya kungekudala ukuba amarhe abonisa ukuba iTel Avid iya kuba sisixeko esisamkelayo.
Uyibonisa njani imisebenzi esiyenzileyo ngesibali-manani esikrinini
Isibali sokubala semveli seMacOS sisivumela ukuba sibonise imbali yokusebenza ngokungathi sisibali sokubala.
U-Apple uqeshe iVidiyo ye-Broadcom kunye ne-Viacom yenkonzo yevidiyo
Inkampani esekwe eCupertino yenze utyikityo olutsha ukwandisa inani labantu abaza kujongana nenkonzo yevidiyo esasazwayo
Ukubonakala kokuqala kweKhayaKit kwi-MacOS Mojave
Ukubonakala kokuqala kweKhayaKit kwi-MacOS Mojave, ayikuvumeli ukongeza izinto kwisicelo, kodwa iyakuvumela ukuba ukujonge.
Nge-29 kaJuni iApple ivula iVenkile entsha yeApple eMacau
I-Apple izakuvula iVenkile entsha ye-Apple eMacau, ngakumbi eCotai, nge-29 kaJuni, njengevenkile yesibini yenkampani kweli lizwe.
IMacOS Mojave iya kubonelela ngenkxaso kwiiglasi eziyinyani zeHTC Vive Pro
Inguqulelo elandelayo yenkqubo yokusebenza ye-Apple yeeMacs iya kuhambelana nezibuko eziyinyani zeHTC Vive Pro.
I-Apple iyawubona umba wehardware kwi-2017 MacBook Pros ngaphandle kweTouch Bar
I-Apple iyawuqonda umba wehardware kwii-2017 MacBook Pros ngaphandle kwe-13-intshi yeTouch Bar. Ingxaki inokuchaphazela i-SSD kunye nebhodi yomama.
Imigodi ye-idijithali yemali ayivumelekanga kwi-Mac, i-iPhone kunye ne-iPad
Ukusuka kwiApple abafuni ukumbiwa kwemigodi yeedijithali ukuze zichaphazele abasebenzisi okanye izixhobo kwaye ...
U-Apple uzibophelele ekufikeleleni ngokodliwanondlebe kunye noSarah Herrlinger ka-Apple
USarah Herrlinger, uMlawuli we-Apple kwiNkqubo-nkqubo yokuFikeleleka kweLizwe kunye namanyathelo okuqala, uthathe inxaxheba kwiPodcast yokuFikelela eWWDC 2018
I-Apple ikhupha i-beta yesibini ye-tvOS 11.4.1 kunye ne-watchOS yabaphuhlisi
I-Apple ikhupha i-tvOS 2 beta 11.4.1 kunye ne-watchOS 5 beta yabaphuhlisi
I-Adobe ibeka iifonti ezenziwe nguBauhaus kwi-Cloud Cloud
I-Adobe ibeka iifonti ezenziwe nguBauhaus kwi-Creative Coud phantsi kwegama elithi Joschmi kunye neXants. Eminye imithombo emithathu iya kuziswa kungekudala
Ukhetho lokufomatha idiski GUID alubonakali kwiDisk Utility
Kule meko zizakhelo zokubonisa ezinikezelwa sisixhobo seDiski yokuSebenzisa kwi-macOS, ...
Ungasifumana njani isiphumo seMacOS Mojave yamaphephadonga kuyo nayiphi na iMac
Ngaba uyafuna ukwenza isiphumo sodolo olunamandla lweMacOS Mojave ngaphandle kokufaka naluphi na uhlobo lwe-beta kwiMac yakho? Apha sichaza indlela
IMacOS Mojave isivumela ukuba sabelane ngamagama okugqitha nge-AirDrop
IMacOS Mojave isivumela ukuba sithumele ipassword ngeAirDrop kwizixhobo ze-iOS ngokukhawuleza nangokulula.
Hlaziya uqikelelo lwebha ye-MacOS kuhlobo lwesi-4
Isibikezelo seBar sisicelo esikwi-bar yemenyu. Ukucinezela ivula iwijethi ngolwazi oluchanekileyo nolunokuqwalaselwa kunye nokwazi imozulu
"Kungekudala" iya kuba licandelo elitsha le-Apple Music
Enye yeenoveli ezilandelayo eziza kuvela kwisandla seApple Music, siyifumana kwiinoveli ezilandelayo eziza kuphehlelelwa nguApple kwiqonga lomculo lokusasaza
Ukulungiswa kweVenkile yeApple kuza eLondon naseBeijing
Ukulungiswa kweVenkile yeApple kuza eLondon naseBeijing. Kwimeko yeevenkile ezinkulu zeApple, ukulungiswa kwayo kwangexesha
WWDC 2018, MacOS Mojave, iwatchOS 5, iOS 12, nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Iveki apho u-Apple wabhiyozela i-WWDC 2018, inkomfa yehlabathi ngamawaka, iphelile ...
U-Angela Ahrendts ubhengeza iPrototyping App yokuSungula iVenkile yeApple ngoJuni
U-Angela Ahrendts ubhengeza iprototyping app ukuya kwiVenkile ye-Apple ngoJuni. Kukodwa ukubheja kweApple ngokwenkqubo.
IiMaphu ze-Apple zinokufakwa kumaphepha ewebhu ngenxa yesixhobo se- «MapKit JS»
UApple unikezela abaphuhlisi isixhobo esitsha ukuze bakwazi ukusebenzisa iiMephu zeApple kumaphepha ewebhu. Igama lesi sixhobo yile: ImephuKit JS
Umfazi ufunyenwe enetyala lokusebenzisa iApple Watch xa eqhuba
Ngaphandle kobungakanani bayo, iApple Watch iphantsi kohlwaywa ngamagosa ezendlela xa ebonisana nayo, nokuba kuyaziwa kuphela ixesha.
IMexico iya kuba nevenkile yayo ephambili eMexico City
Izicwangciso zika-Apple eMexico zibandakanya ukuvula ivenkile entsha yeflegi eMexico City kwiziko lokuthenga iAntara Fashion.
Ivenkile yeWalnut Creek Apple iqala ukubonisa ukumila kwayo
Ivenkile yeWalnut Creek Apple iqhubele phambili. Ivenkile ikhumbuza ezinye izakhiwo ze-Apple kwaye ibizwa ngokuba yiVenkile ekhethekileyo yeApple.
Abaphuhlisi bewebhu kuya kufuneka bahlengahlengise umxholo wewotsOS 5
Abaphuhlisi baya kuba nakho ukuguqula ii-webs ukuze zibonwe kwi-Apple Watch. Kuyamangalisa indlela iiwebhu ezibukeka ngayo kwaye sihamba ngayo.
I-Apple icela abaphuhlisi ukuba bahambise ulwandiso lwe-Safari kwisikhangeli ngokwaso
Ukuqala kwinyanga ezayo kaDisemba, izandiso ezingaphandle kweZicelo zeSafari, ezifumaneka kwiVenkile yeApple yeMac, azisayi kubakho.
Buyela kwinqaku lam leMac liyanyamalala kwi-MacOS Mojave
Ukubuyela kwinxalenye yam yeMac, esivumela ukuba sinxibelelane neMac yethu kwenye iMac ngokukhuselekileyo kwi-Intanethi, inyamalale ngokupheleleyo kuseto lwe-iCloud kwi-MacOS Mojave.
Ungayongeza njani iWaze okanye iimephu zikaGoogle kwiCarPlay
IOS 12 iya kukuvumela ukongeza iimephu zomntu wesithathu kwiCarPlay: Iimephu zikaGoogle okanye iWaze, umzekelo. Sikubonisa indlela yokongeza.
I-AirPlay 2 iza kwizithethi ze-Sonos ngoJulayi
Izithethi ze-Sonos ziya kuhlaziywa kwi-AirPlay 2 ngoJulayi, njengoko kwabhengezwa yinkampani kwintetho yayo yamva nje.
INorth Carolina sele inikezela ngolwazi lwezothutho lukawonkewonke kwiiMephu zeApple
INorth Carolina ngurhulumente wokugqibela waseMelika ofumene ukhetho lokukwazi ukujikeleza ilizwe ngaphandle kokusebenzisa ezothutho labucala okanye isithuthi sakho.
Amanqaku amatsha eza kwii-AirPods, Mamela ngokuPhilayo
Ukuphulaphula ngokukuko luphawu esele lukhona kwi-iOS 11 ye-MFi yentloko engenazingcingo eqinisekisiweyo….
UCraig Federighi akaboni isikrini sokuchukumisa kwiiMac zekamva
Amarhe amaninzi afikelele kumnatha malunga nokuba i-Apple izakwazisa iMac ngescreen sokuchukumisa kwaye ...
ILogitech Craft, ngaphezulu kwekhibhodi
Sijonga ezona keyboard zibalaseleyo onokuzithengela iMac yakho ngoku, ngokukhanyisa ngasemva kunye nesipina esineempawu ezinokwenziwa ngokwezifiso.
I-APFS ziya kufumaneka kwiidrive ezinzima nakwiFusion Drayivu kwi-MacOS Mojave
I-APFS ziya kufumaneka ukulungiselela ukuqhuba kanzima ngokwesiko okanye ngoomatshini, kunye neFusion Drayivu, kwi-MacOS Mojave ukuqala ngo-Septemba.
Kule veki sitshintshe usuku ukuba luqhubeke ngokupheleleyo neWWDC kaApple. Ngokomgaqo sonke besilindele ezinye ...
Intetho ephambili ka-Apple ishwankathelwe kwimizuzu emi-6
Ngaphandle kwamathandabuzo eyona imbi kakhulu kolu hlobo lwenqaku eliphambili kuthi kuthi abo bajonge okanye basasaze ngqo ...
Khuphela i-MacOS Mojave yamaphephadonga kwi-Mac yakho
Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, sele sinayo iMacOS Mojave yamaphephadonga afumanekayo kubo bonke ...
I-watchOS 5 ayizukuhambelana nesizukulwana sokuqala se-Apple Watch
Iminyaka emithathu emva kokumiliselwa kwayo, iApple inike nje isiphumo sokugqibela kwisizukulwana sokuqala seApple Watch, isixhobo esingayi kuhlaziywa ukubukela iOS 5
Nantsi into entsha kwi-MacOS Mojave Finder
Isifumani kwiMacOS Mojave siya kuzisa njengezona zinto zintsha, ukubanakho ukwenza iPDF kukhetho lweefayile kunye nokuncitshiswa kwevidiyo kwiFumana ngokwayo.
Ezi ziindaba esiza kubona kwi-watchOS 5
I-watchOS ibonisiwe kwi-WWDC ngeendlela zokuhamba ezihamba-hambayo kunye neendlela ezimfutshane, kunye nokwabelana ngomxholo wezemidlalo.
Ixesha lobuso liya kukuvumela ukuba uxoxe nabantu abangama-32 ngaxeshanye
Kwi-iOS 12 nakwi-macOS 10.14 siza kubona i-FaceTime entsha eya kuthi isivumele, phakathi kwezinye izinto, ukuba sincokole nabantu abangama-32 ngaxeshanye.
IMemoji, iApple iyibuyisela kwiSamsung
Ngaphandle kwamathandabuzo, xa iApple isiba nzulu, akuyomfuneko ukuba uthethe kakhulu kwaye kule meko iMemoji ...
Iifoto kwi-iOS zizisa njengento entsha «Yakho» kunye nokhetho Iingcebiso zokwabelana ngeefoto
Iifoto ze-iOS ziya kuzisa njengezinto ezintsha kwi-iOS 12 icandelo laKho kunye neengcebiso zokwabelana ngeefoto.
Ifomathi yefayile yokwenyani entsha ye-Apple ibizwa ngokuba yi-USDZ kwi-iOS 12
U-Apple usandula ukubhengeza ifomathi yefayile yokwenyani entsha ebizwa ngokuba yiNkcazo yeMeko yeHlabathi (i-USDZ)
IOS 12 ibonisiwe, ezi ziimpawu zayo zokuqala
IOS 12 ityhilwa eWWDC 2018. Izicelo zivula ukuya kuthi ga kwi-40% ngokukhawuleza, ikhibhodi ngama-50% ngokukhawuleza, kunye nekhamera ukuya kuthi ga kuma-70% ngokukhawuleza.
I-Apple Keynote ihlala apha
Live Blog WWDC 2018: iOS 12 and much more This is the post apho uya kuba nakho ukulandela ...
Ungayenza njani imiyalezo kwi-iCloud
Ukuba ufuna ukwenza umsebenzi wokuvumelanisa umyalezo omtsha nge-iCloud, siya kukubonisa ukuba singayenza njani.
Iividiyo ezimbini ezintsha zokujonga iidrone zeApple Park
Xa sonke sigxile ekuqaleni kwenqaku eliphambili le-Apple ngale njikalanga kwinkqubo yeziganeko ...
Isifundo sokuvula imowudi emnyama-emnyama kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra kwaye ubone ukuba ijongeka kanjani le mowudi, kude kube kukhutshwa i-macOS 10.14
Usuku oluphambili lwabasebenzisi be-Apple emva kweeveki ezimbalwa apho iWWDC ibikhona ...
Kwiiyure ezimbalwa ezizayo iApple ibhengeze ikhampasi yayo entsha yoPhando lwePark Triangle
I-Apple iyakube igqibezela indawo yeCampus yayo eMantla Carolina, ngokuqikelela kwiZiko loPhando loNxantathu, emva kwesivumelwano nabasemagunyeni.
WWDC, ARM, HomePod kunye nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Iveki ephambili yeApple kunye neenguqulelo ezintsha ze-OS ezahlukeneyo, kwiiyure nje ezimbalwa izakuqala eSan José ...
Izikrini zeMacOS 10.14 zivuziwe: Indlela eNtsundu entsha, usetyenziso lweApple News yeMac phakathi kwabanye
Ukucoca izikrini zokuqala ze-macOS 10.14 ngumphuhlisi uSteve Troughton Smith, eqaqambisa indlela emnyama ebanzi yenkqubo
Ialbhamu entsha kaKhan West iyafumaneka kwiApple Music kwasekuqaleni
Icwecwe elitsha likaKhan West liya kufumaneka kwasekuqaleni kwiApple Music kunye namanye amaqonga omculo asasazayo.
I-Apple kunye neqela likaMicrosoft ukwenza umgangatho omtsha we-USB kwizixhobo ze-braille
Ukwenza itekhnoloji ifumaneke kuye wonke umntu yenye yezona ndawo ziphambili itekhnoloji enkulu inayo. I-Apple kunye neMicrosoft badibene ukuzisa umgangatho omtsha we-USB kwimiboniso ye-braille kunye nokwenza lula ukusetyenziswa kwayo ngaphandle kweqonga
Ukutyikitywa kweenjineli ezininzi ze-Intel ngu-Apple, kuvula ingxoxo mpikiswano kwiiprosesa zeMac
Ukutyikitywa kweenjineli ezininzi ze-Intel ngu-Apple kuvula kwakhona ingxoxo-mpikiswano malunga neeprosesa ze-Mac.
IPixelmator Pro ihlaziywa ngenani elikhulu lezinto ezintsha
IPixelmator Pro ihlaziywa ngenani elikhulu lohlengahlengiso: iibrashi, ukukhanya, umbala kunye nohlengahlengiso lokugcwalisa, uninzi lwazo luvela kwiTouch Bar.
UGurman ukhupha uqikelelo lweWWDC kwaye akukho zixhobo zekhompyutha kuzo
Ngaphandle kwamathandabuzo yinto engabuyeli kuthi kwaye kukuba kuninzi lweziganeko zangaphambili ...
I-Apple ivala isivumelwano sokurekhoda uthotho malunga nembongi uEmily Dickinson
Kude kube namhla, kwaye ngokwento esiyifundileyo kumajelo eendaba ahlukeneyo, ngakumbi kupapasho olwahlukeneyo, iApple ...
Ukwandiswa kweofisi ye-Apple eSanta Clara kuyaqhubeka
I-Apple iya kuvala inani elibalulekileyo leeofisi kwiNtaba yaseSanta Clara, zininzi izinto ezinokuthi ziqwalaselwe, kodwa iinjongo nomhla wokuhamba awaziwa.
IZiko leNgqungquthela iMcEnery eSan José liqala ukufumana uhombiso lweWWDC
Iziko lendibano apho iApple iza kuthi thaca ezinye zeenoveli eziza kuvela kwisandla seMacOS 10.14, iOS 12, tvOS 12 kunye neewatchOS 5, sele iqalile ukuzihombisa ngalo msitho.
Uhlaziyo loMlobi kuhlobo 5 ekugqibeleni lufikile
Isicelo somhleli wokubhaliweyo wokugqibela sigqityiwe ukuhlaziywa kwi-macOS, kunye neendaba zangaphandle, ulawulo lwefayile kunye nokubhukumaka.
Ngobusuku bezolo kwi # podcastapple sithethe ngobude malunga neendaba ze-iOS, ii-watchOS kunye ne-tvOS….
Ibetha isithethi esine-smart esichazwe kwangaphambili nge-WWDC 2018
Enye yezinto ezimangazayo zeWWDC 2018 elandelayo inokuvela kwisandla seBeats nakwimo yesithethi esine-smart ngokudityaniswa kukaSiri
ICarPlay yamkelwa ngakumbi eYurophu naseMelika
Ukwamkelwa kweCarPlay ngabasebenzisi kuye kwanda kakhulu kwiminyaka yakutshanje kwaye namhlanje, isiqingatha seemoto ezithengiswa eYurophu naseMelika zibandakanya iCarPlay okanye i-Android Auto.
Zonke ezi zizithethi ezihambelana ne-AirPay 2
Abafana abavela eCupertino bancede iwebhusayithi entsha apho inkampani isinika ulwazi oluneenkcukacha malunga ne-AirPlay 2, kubandakanya zonke izithethi ezifanelekileyo.
U-Apple ukhuphe uhlaziyo olutsha lwe-HomePod ngophuculo oluninzi
UApple usungule uhlaziyo lwesoftware entsha kwisithethi sayo esilumkileyo esenza ukuba ekugqibeleni ifikelele koku ...
I-TouchBar yam-Imithetho yam, indlela entsha yokwenza ngokwezifiso ibha kwi-MacBook Pro
Isicelo esitsha siyavela, sikwisigaba esivelileyo esincinci, ukwenza ibar ye-touch ye-2016 kunye ne-2017 MacBook Pro.
I-HomePod iza kufika eCanada, eFrance naseJamani nge-18 kaJuni
Ngokwe-BuffFeed medium, i-HomePod iyakwandisa ukubakho kwayo ukuya kumazwe amathathu ngoJuni 18: Canada, France naseJamani.
URazer wenza amakhadi emizobo angaphandle ahambelane neMacOS
URazer wenza amakhadi akhe emizobo angaphandle ahambelane neMacOS kwaye aqalise iCore X, ibhokisi eya endlwini ye-eGPU ngenkxaso yeMac kunye nobuninzi bokuhambelana.
Ezinye iiMac Pro zescreen mounts azomelelanga ncam
I-Youtuber isixelela ngeengxaki ngenkxaso ye-iMac Pro ethengiswa yi-Apple, ebangele ngaphezulu kwengxaki enye ngenxa yokungazi i-Apple.
Okokuqala ibrashi yecawa. Ngoku amagcisa esitrato aseLondon amkela iApple Pay
Abadlali bezitrato bamva nje bajoyine itekhnoloji yeentlawulo zombane i-Apple Pay esisinika yona, njengoko kunjalo nakwicawe yaseTshetshi.
Uluhlu lokudlalayo lwePrimavera 2018 ngoku luyafumaneka kwiApple Music
I-Apple Music yenza ukuba ifumaneke kuthi nge-Apple Music, uluhlu lokudlala lweengoma eziza kuba yinxalenye yePrimavera Sound 2018, ebanjelwe e-Barcelona ukusukela nge-30 kaMeyi ukuya kwi-3 kaJuni.
I-Apple iya kwazisa kwikamva lezicelo ezifunyenwe ngoorhulumente zokuphelisa izicelo
I-Apple izakuxela izicelo ezivela koorhulumente zokususa okanye zokurhoxisa izicelo kwiivenkile ezahlukeneyo zeenkampani zeCupertino.
Imisebenzi yeVenkile yeApple yeYunivesithi yaseSeattle ekufutshane nasekugqityweni
Imifanekiso yokuqala yeVenkile enkulu elandelayo yeApple ukubona ukukhanya kuvela eSeattle, apho iApple yakha ivenkile entsha kwikhampasi yaseyunivesithi.
Funda indlela yokukhuphela ikhalenda yeNdebe yeHlabathi yeBhola ekhatywayo kwi-Mac yakho
Yongeza ikhalenda yeNdebe yeHlabathi kwiKhalenda. Ukwenza oku, fikelela kwiwebhusayithi yekhalenda kwaye ungenise le khalenda kwiphepha olifunayo.
I-Apple ivala iVenkile yeApple yeAtlantic
I-Apple ithathe isigqibo sokuvala iVenkile yeAtlantic yesiXeko seAtlantic ngenxa yokwehla kukhenketho. Yivenkile yesibini yeApple ukuvala unyaka. Abasebenzi baya kufuduselwa kwezinye iindawo.
Ngaphezulu kwezithuthi ezingama-400 ziyahambelana neApple CarPlay eMelika
ICarPlay iya isiba nanda ngakumbi kwishishini leemoto. Ngaphezu koko, abasebenzisi yenye yeempawu ezifunwa kakhulu. Kwaye e-USA sele zingaphaya kweemodeli ezihambelanayo ezingama-400
IMacintosh, intambo ye-USB C enesaphulelo, izimemo zeWWDC nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Enye iveki sikwiCawa kwaye kufuneka siphumle kancinci phambi kweMac kwaye sibone amanqaku aphambili ...
Liya kuba yintoni igama lenkqubo elandelayo yeMac?
Senza uhlalutyo apho iya kuba yinkqubo yokusebenza elandelayo ye-Mac.Amagama aliqela ayaqwalaselwa, nangona eyona izuza amandla ngakumbi yiMojave.
Imihla yokuhambisa ngenqanawa yokukhetha iiMacBook Pros ngoJuni 6
Imihla yokuhanjiswa kwee-intshi ezingama-13 ze-MacBook Pros ngaphandle kwe-Apple Touch Bar zisandula ukudlula kwaye…
Ukusilela kokuqala komncedisi weAmazon waseAmazon sele kufike
Yeyiphi impazamo eyenziwe ngu-Alexa, umncedisi weAmazon, phakathi kwezinye izinto ezininzi, olawula izithethi ...
Ngaba siza kubona iVenkile yeWindows App kwiMacOS 10.14?
Kukho amarhe malunga nokudityaniswa kwezivenkile zimbini zeApple. Yintoni eza kwenzeka kwi-macOS 10.14 ayaziwa, kodwa iMac Store ifuna uphononongo lwemodeli yayo.
IiMaphu zeApple zichaze kakubi ezinye iindawo eCanada
Ezinye iindawo zaseKhanada zibhalwe igama lesikhululo sokuvota endaweni yegama eliqhelekileyo ledolophu.
I-Apple ibonelela ngenyanga yokuvavanya kubasebenzisi abangenayo i-iCloud
U-Apple uqalile ukunika inyanga yasimahla ye-iCloud kubo bonke abo basebenzisi bangenayo indawo yokugcina eyaneleyo kwi-iPhone yabo xa besenza indawo yogcino.
Okokuqala iMic Pro engundoqo ye-18 edweliswe kwiphepha elihlaziyiweyo lika-Apple
Eyokuqala ehlaziyiweyo ye-iMac Pro ye-18 ivela kwivenkile yokuhlaziya i-Apple e-US ngezaphulelo ze-15%
Umculo onamandla, uvuko lwe-iPod shuffle ehambelana neSpotify
Iifomathi zemidiya ezindala kunye nezixhobo ezindala, ngandlela thile, zibuyela umva. IVinyl, ...
I-MacOS idlula i-Classic OS X njengenkqubo yokusebenza kwe-Apple ende kakhulu
I-MacOS okwangoku yeyona nkqubo yokusebenza ye-Apple inde esebenza ngaphezu kweminyaka eyi-17 ngasemva kwayo, emva kokugqitha kwi-Classic OS X.
Kwi-podcast yokugqibela esiyirekhodileyo phakathi kweqela leSoy de Mac kunye ne-Actualidad iPhone sithethe kakhulu ngeKhayaKit.
Iwebhusayithi yeApple ngoku iyafumaneka ukulawula yonke idatha njengoko uthanda
I-Apple sele inewebhusayithi yayo entsha yolawulo lwedatha esebenzayo ngokuchasene ne-GDPR. Indlela entsha yokulawula yonke into owabelana ngayo kunye nokwazi kuqala into egcinwa yiApple ngawe
Amaqela eApple adibana neVolkswagen ukukhupha iteknoloji yokuqhuba ngokuzimela kwiibhasi zabasebenzi
Inkampani esekwe eCupertino isebenza ngokubambisana neVolkswagen ukwenza inkqubo yokuqhuba ezimeleyo yeebhasi
Uthotho lweApple 3 LTE zezona zisetyenziselwe ukubukela
I-Apple Watch Series 3 ene-LTE yeyona wotshi idityanisiweyo, ngokophando olwenziwe yiCanalys, apho iipesenti ezingama-59 zeewotshi ezikweli candelo ziyiApple.
Ngeli xesha siza kuba nokusasaza ngqo kwigama eliphambili eWWDC
Yinto eqhelekileyo mva nje kwiimpawu eziphambili zenkampani yeCupertino, ukwenza usasazo ngqo, kodwa emva ...
Abadali bexesha elinye elityikitywe nguApple ukusingatha ukuqala kwakhona kwamabali "amangalisayo"
Abavelisi bangoku bexesha elithile batyikitye neApple ukusingatha ukuqala kwakhona koluhlu olwenziwe nguSteven Spielberg Amabali aMangalisayo
IMac eneFusion Drive ikufutshane nokuba ihambisane ne-APFS
Umphathi wesoftware ka-Apple, uCraig Federighi, ucacise nge-imeyile kumsebenzisi ukuba inkampani ...
Ulijonga njani inqanaba lebhetri yee-AirPods kwiMac
Ukuba ufuna ukwazi ukuba yeyiphi inqanaba lebhetri yee-AirPod ngeMac, apha ngezantsi sikubonisa ukuba singayenza njani ngaphandle kokuya kwi-iPhone okanye kwi-iPad.
I-Starbucks igqwesa Apple Pay ngentlawulo ye-smartphone
Itekhnoloji yokuhlawula ngaphandle kwamacingo yeApple Pay ayisiyoyona isetyenziswa kakhulu eMelika, kodwa yileya yeStarbucks, iyamangalisa njengoko inokubonakala ngathi.
Umqeqeshi weApple Bukela imitya emitsha yaziswa ngehlobo
Kwaziswa imitya emitsha, ingqokelela yehlobo leApple yokujonga uphawu lomqeqeshi
U-Apple uthumele izimemo ze-WWDC 2018 ngoJuni 4 kumajelo eendaba
U-Apple sele ethumele izimemo kwiNkomfa yaBaphuhlisi yeHlabathi ye-2018 ngoJuni 4 ukuya…
Ungazifumana njani ngokukhawuleza zonke iifoto ezigcinwe kwiifoto kwi-macOS
Ngaba ufuna ukufikelela ngokuthe ngqo nangokukhawuleza kuzo zonke iifoto ezenziwa ziifoto ze-MacOS? Siza kukuxelela ukuba ulubeka njani olu fikelelo kuMfumani
Ungazilungelelanisa njani ii-icon ze-desktop ukuze zingaphinde zixubeke
Ukuba udiniwe kukubona indlela ii icon kwi-desktop yakho ye-Mac engalandeli nawuphi na umyalelo okanye ulungelelwaniso, eli nqaku liza kukubonisa ukuba singayisombulula njani le ngxaki inkulu.
I-Intel iqinisekisa umahluko omtsha wokuba sesichengeni kweSpecter
I-Intel iqinisekisa okwahlukileyo kwe-4 yokuchaphazeleka kweSpecter. Abaphuhlisi besoftware banenguqulo ye-beta yesiqwengana esifumanekayo kubo.
U-Obama ekugqibeleni utyikitye iNetflix, eshiya iApple ecaleni
Umongameli wangaphambili wase-United States utyikitye isivumelwano ne-Netflix sokukhokela uthotho lweenkqubo kunye namaxwebhu kwimiba ebaluleke kakhulu kubongameli bakhe.
Ilizwi elitsha likaSiri kunye neKhayaPod elitsha kwiWWDC 2018
Njengoko bendilindele kwinqaku elidlulileyo, iWWDC 2018 yenza iindaba ngokwe ...
Uyicwangcisa njani iMac yakho ukuba icime okanye icime
Ngaba uyazi ukuba unokwenza inkqubo yokuqalisa ngokuzenzekelayo kweMac? Unokucwangcisa ukulala kwabo. Kwaye apha sikubonisa ukuba ungayenza njani
I-Apple ilahla indawo enye kwinqanaba le-Fortune 500
Inkampani esekwe e-Cupertino ibone inkampani yeoyile i-Exxon Mobil igqitha i-Apple kunyaka ophelileyo, iyilahla kwindawo ye-4 njengenkampani enemali eninzi.
Iiglasi zenyani ze-Apple ezongeziweyo zinokufika kwimarike ngo-2021
Sibuyele kwi-tow kunye ne-augmented reality glasses ekucingelwa ukuba i-Apple isebenza kuyo, ubuncinci ...
I-Apple iyakuthathela ingqalelo ukuzisa kwintengiso isithethi esongezelelweyo kwiPodPod yasekhaya. Kusesekuqaleni kakhulu ukuba uza kuba sisithethi esincinci, okanye ngokuchaseneyo, isiphelo esiphakamileyo.
Ukuba uhlala ufuna ukutshintsha ubungakanani beempawu ze-desktop yakho ye-Mac, nantsi indlela yokwenza.
IPad, le yinqaba abayakhayo eDubai esekwe kwi-iPod
Esinye sazo sigqityiwe ngokuqinisekileyo esinokundwendwela abakhenkethi ngaphezulu kwesinye. Igama lakhe nguPad. Ime eDubai kwaye isekwe kuyilo lwe-iPod
Inkxaso mali ye-0%, inkqubo entsha yokubheja, iiVenkile zeApple azivumelekanga eFrance nangaphezulu. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
INkomfa yabaPhuhlisi beHlabathi ye-Apple ikufutshane nekona, ke kwiiveki ezimbalwa ...
Inkxaso-mali ibuyela kwivenkile ekwi-intanethi ye-Apple yase-UK
Ukuxhaswa kweemveliso ze-Apple kwiwebhusayithi yase-UK kuyafumaneka kwakhona. Ngokucacileyo, iApple ifuna ukukhuthaza ukuthengiswa kweemveliso kwi-0% yenzala
I-Apple Bukela intambo yokuqokelela intwasahlobo eqala ukuphela
Imitya yasentwasahlobo yeApple Watch iqala ukunxiba: ILemonade, iDenim Blue okanye iRaspberry ebomvu, ngamagama abo.
Jonga ukuba unayo "i-mshelper" ye-malware kwi-macOS kwaye siza kukuxelela ukuba uyisusa njani
Sikufundisa ukuba ungayifumana njani i-mshelper malware kwaye uyisuse kwi-mac yakho kwimizuzwana embalwa.
UMoshi usungula intambo yokutshajisa iMacBook yakho kunye nasiphi na isixhobo se-USB-C
I-Moshi USB-C Integra intambo yokutshaja yenye yezona zinto zibalaseleyo kwikhebula elisemthethweni le-Apple lomgangatho wezinto kunye nexabiso
Kufuneka wenze ntoni ukuba iMac yakho ayiyiboni i-hard drive yangaphandle
Ukuba iMac yakho ayiyiboni idrive yangaphandle okanye intonga ye-USB xa uyiqhagamshela, nazi ezinye zezizathu ezinokubakho kunye nesisombululo kuzo zonke
I-Apple ifake i-1.500 yezigidi zeerandi zokuqala isohlwayo seIreland
Abafana abasuka eCupertino benze nje idipozithi kwiakhawunti yesibambiso evaliweyo, eyokuqala yeentlawulo ...
Izikhululo zeAirPort eziqala ukunyamalala kwezinye iivenkile
Ukufumaneka kwezikhululo ezisisiseko seAirPort kuqalile ukwehla kwaye okwangoku awusenako ukuthenga iAirPort Express, kodwa ungathenga iCapsule eXineneyo kunye nexesha kwiiyunithi ezinqunyelwe.
I-Apple ikuthatha ngokungathí sina ukuFumaneka kweemveliso zayo
Ukuba sithathela ingqalelo idatha ebonelelwe nguMbutho wezeMpilo weHlabathi, umntu omnye kwabasixhenxe uhlala ne ...
Le yipaki yemoto engaphantsi komhlaba eApple Park [Ividiyo]
Ividiyo ipapashiwe apho unokubona ukufikelela kunye nokupaka komhlaba phantsi kweApple entsha ...
Iiprosesa zokuqala ze-Intel ezine-32GB LPDDR4 RAM zifika
Siyazazi iiprosesa zokuqala ze-32GB ze-RAM kunye nokuqinisekiswa kwe-10nm, eya kuthi inike ingxelo ngamandla kunye nokusetyenziswa okuphantsi kwii-laptops.
I-Apple Pay iyaqhubeka nokwanda kwayo kumazwe aphesheya kwaye ngoku iyafumaneka e-Ukraine
Itekhnoloji yokuhlawula iApple Pay isandula ukufika eUkraine, yiyo loo nto izalisekisa isibhengezo senkampani esingaphantsi kwenyanga ephelileyo.
Iibhanki ezintsha ezingama-30 zijoyina iApple Pay eMelika
I-Apple Pay iyaqhubeka ukongeza kwaye namhlanje sibhengeza ukufika kweebhanki ezintsha ezingama-30 e-United States, zabasebenzisi ...
I-Peepers iya kuba nexesha elinzima nesihluzi seKensington seMacBook Pro
I-Kensington yazisa ngesihluzi seMacBook Pro ethintela ukujonga amehlo kunye nokunciphisa okona kukhanya kukukhanya emehlweni ethu.
I-Apple ifuna iindawo eNorth Carolina naseVirginia ukwakha ikhampasi entsha
Inkampani esekwe kwiCupertino ivavanya indawo ezimbini eMelika, ukwenza ikhampasi entsha yeR & D.
I-Apple yandisa isitokhwe se-2012 kunye ne-2013 iMacBook Pro iibhetri
Iingxaki zokutshintsha ibhetri yeMacBook Pro ka-2012 kunye no-2013 ziqala ukusonjululwa, kunye neApple enesitokhwe kwakhona
Ungawucwangcisa njani umsebenzi wobugcisa wee-albhamu zethu zeTunes njengezikhuseli zesikrini
Ukuba unelayibrari enkulu ye-iTunes, unokufuna ukusebenzisa umsebenzi wobugcisa kwidiski yakho njengesikhuselo-skrini sakho.
Wazi njani xa uyile i-ID yakho ye-Apple
Ngaba uyafuna ukwazi ukuba wawungumhla wokudala i-ID yakho ye-Apple? Sikufundisa ukuba uyifumane ngokusebenzisa i-iTunes kunye nembali yakho yokuthenga
UTim Cook uqinisekisa abasebenzisi abangaphezu kwezigidi ezingama-50 kwi-Apple Music
Sithethe ixesha elide malunga nabasebenzisi iApple Music abanayo kunye nokufika kwenani lama-50 ...
Uyenza njani idatha ebonisiweyo xa usenza umnxibelelwano omtsha
Ukuba amasimi aboniswe ngokungagqibekanga ngalo lonke ixesha senza umfowunelwa omtsha awanelanga, kweli nqaku sikubonisa ukuba sinokwandisa okanye sinciphise elo nani.
Ungalongeza njani inani leveki kwisicelo seKhalenda
Isicelo seKhalenda yeMacOS siyasivumela ukuba siqwalasele usetyenziso ukusibonisa inani leveki esikuyo
Thintela usetyenziso lwekhalenda ekusaziseni ngeeholide nangemihla yokuzalwa
Ukuba sidiniwe kukufumana izilumkiso kwikhalenda yethu yemihla yokuzalwa okanye iiholide, apha ngezantsi siza kukubonisa ukuba ungazenza njani zombini iikhalenda.
ICanal + France ibonelela nge-Apple TV 4K njengenye indlela yedekhoda yesitishi
Iapile kunye neCanal + France bayafikelela kwisivumelwano sokurenta iApple TV 4K ukubukela iinkonzo zejelo laseFrance, endaweni yedecoder yendabuko.
Uyisebenzisa kanjani iSiri kwi-Mac yakho ukuze uvelise ngakumbi
I-Siri kwi-Mac inokuba sisixhobo esikunceda yonke imihla. Siza kukunika eminye yemisebenzi onokuyinikela kumncedisi we-Apple
Uyithintela njani i-imeyile ekulayisheni imifanekiso ekude yeimeyile kwaye ke ubathintele ekulandeleleni thina
Enkosi kukhetho olunokuthi lufumaneke ngeMeyile, sinokubathintela abathumeli ii-imeyile ekubeni bazi ukuba sizifundile na ii-imeyile zabo.
IiVenkile zabantwana zeVenkile yeApple azivumelekanga eFrance
Ngokuqinisekileyo ezi ziindaba ezimangazayo ngezizathu ezininzi, kodwa ezona zinto zicacileyo kukuba bayathintela ...
Usekela Mongameli we-Apple uLisa Jackson ufumana amabhaso okhathalele indalo
U-Lisa Jackson kunye no-Apple bafumana iMbasa yokuFezekisa okusingqongileyo ekusebenziseni ubuchule obuhlaza kwikhonkco lemveliso lika-Apple
Inani leemoto ezizimeleyo zeApple eCalifornia lidlula ama-XNUMX
Inkampani esekwe eCupertino iphinde yaphinda yalandisa inani lezithuthi ezikhoyo ngoku eCarlifonia, zafikelela kuma-55.
USiri no-Alexa abasengamagama afunwa ngootata noomama ngeentombi zabo
Yonke into enento yokwenza nabancedisi belizwi iya ivela ngokuqhubekayo kwaye sinako ...
Ungayicima njani ikhalenda kwiMacOS
Xa ikhalenda ingasetyenziswanga, eyona nto sinokuyenza kukususa kwi-app yethu yekhalenda.
UTim Cook uthatha inxaxheba kwiDyunivesithi yaseDuke
UTim Cook uthatha inxaxheba ekuthwesweni isidanga kwiDuke University, apho wayefunda khona, kwaye ebongoza abafundi ukuba bazimele.
Imali ye-0% e-Apple iphela kule nyanga
Inzala ka-0% ye-Apple iphela ngoMeyi, ke ukuba ubucinga nge ...
Emva kweziphumo ze-Apple zamva nje, ezopolitiko zacela iApple ukuba yehlise amaxabiso
Usopolitiki uRalph Nader, ubhalela uTim Cook ileta, esenza imiboniso ethile malunga nokuthengwa kwakhona kwezabelo okanye ezinye iindlela zokwenza lo msebenzi.
ICarpool Karaoke iyafumaneka kwiapp yeApple TV simahla
I-Talent Show Carpool Karaoke iya kufumaneka kwi-Apple TV application. Siyazazi iindaba xa kuqala ukufotwa kwesizini yesibini
Ikhaya lasekhaya, ujikeleze iApple Watch, Apple Pay, iidrones nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Sele sineentsuku zokuqala ezili-13 zenyanga kaMeyi ezidlulileyo kwaye ixesha lexesha alazi ...
I-Apple ijongene nokuchotshelwa kwezenzo zeklasi ngaphezulu kokusebenza kweekhibhodi zeMacBook Pro
I-Apple ijongene nokuya kuthathwa kwetyala ngokungasebenzi kakuhle kwe-2016 kunye ne-2017 MacBook Pro yezitshixo
Isicelo seNike + Run Club Audio Cheeers sihlaziywa kwiApple Watch
Uhlaziyo lweApple Audio Cheers, umsebenzi obandakanyweyo kwiklabhu yeNike + ekuvumela ukuba ukhuthaze ngaphambi kokwenza umthambo kwaye wabelane ngayo nomhlobo.
I-Apple Watch igcina ubomi obutsha
Ayisiyo eyokuqala, kwaye kubonakala ngathi lixesha lokugqibela ukuba siphindaphinde isaziso apho ...
Ujika njani isikrini sakho seMac ukuba sibe mnyama nomhlophe
Ngaba kufuneka usebenze ngescreen seMac ngombala omnyama nomhlophe? I-macOS inento elandelwayo ekuvumela ukuba usebenze ngale ndlela. Oku kujoliswe kubantu abaneengxaki zombono
Indlela yokuthumela ngaphandle amanqaku kwiifomathi zePDF
Kwiminyaka yakutshanje, isicelo seNqaku sibe sisixhobo esihle ekufuneka sithathele ingqalelo sonke ...
Ukwakhiwa kweziko ledatha elitsha eIreland kurhoxisiwe
UApple usandula ukubhengeza ukurhoxiswa kweprojekthi entsha yolwakhiwo kwiziko ledatha eIreland, emva kwayo yonke ...
UGoogle usebenza kwiwatchwatch yakhe eza kuza nePixel 3
Ingxilimbela yokukhangela isebenza ekumiliseleni ukuba ingaba yeyiphi na iwatchwatch yokuqala kwimarike, iwatchwatch eya kuba yinxalenye yosapho lwePixel.
I-Apple ifuna ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi eluhlaza kwimveliso yealuminium
I-Apple yenza i-Elysis, ukunciphisa ukukhutshwa kwegesi ekrwada kwimveliso yealuminium, kunye nabenzi ababini bealuminium enkulu
Isamsung ikwalungiselela iiglasi zeAR kunye neVR zokuma kwiApple kwaye zinokuboniswa kulo nyaka
Isamsung ingaphambi kweApple kwaye ibonise ukuzibophelela kwayo kwiiglasi zeAR kunye neVR kulo nyaka. Ukongeza, ngewayedibene noMicrosoft kolu bhejo
UGoldman Sachs unokumilisela i-Apple Pay ikhadi lamatyala
UGoldman Sachs kunye noApple Pay bayakube begqibezela isivumelwano sokuthatha ikhadi le-Apple Pay, kunye nokuxhasa ngemali abo bafumana izixhobo zeApple.
Ulwandiso lweenkonzo zobhaliso ezivela kwiapp yeTV
U-Apple ubhengeze ngengxelo ukongezwa kweenkonzo zobhaliso kwi-TV yayo kwiApple ...
Isiqendu samva nje se-Apple podcast sigxile ngokukodwa kwiGoogle I / O yokugqibela apho uGoogle wasibonisa khona phantse yonke imisebenzi emitsha eza kuthi kungekudala ifike kwiinkonzo zikaGoogle kunye neeapps.
Nantsi into onokuyenza nge-MacOS Switcher app
Inkqubo yeSwitcher isebenza kuqaliso lweMacOS kwaye izisa izinto ezininzi ezifihlakeleyo ngaphandle kokutshintsha phakathi kweapps
I-Apple ivula iziko elitsha lomphuhlisi eJakarta
Abafana abavela eCupertino basandula ukuvula iziko elitsha lomphuhlisi eJakarta, ibe yeyesithathu iApple inikezela ngayo kubaphuhlisi abangaphandle kwe-US.
Iimvume ezizodwa zokubhabha iApple drone?
Alithandabuzeki elokuba emva kwayo yonke ingxwabangxwaba eyonyuswa ziinqwelomoya e-Apple Park ...
Vala iMac yakho ngonqumlo lwebhodi yezitshixo kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra
Kucacile ukuba inkqubo yeMac ine-interface enomusa kwaye inomdla kakhulu, kodwa kukho amaxesha ...
Yenza uluhlu olupheleleyo lwezicelo ozifakile kwi-Mac yakho
Ngaba ufuna uluhlu lwezicelo ezifakwe kwi-Mac yakho? Siza kukunika iindlela ezimbini. Zombini zisebenzisa iTheminali. Kwaye enye yazo iya kuba luluhlu olulula kwaye enye ineenkcukacha
UJony Ive uthetha nge-Apple Watch: "Yonke into esiyenzileyo besicinga ngesona sisombululo silungileyo"
UJony Ive unika udliwanondlebe apho athetha khona ngegalelo kuyilo lweApple Watch kunye nento emele yona namhlanje
Uyenza njani ubungakanani kwakhona beempawu zebar esecaleni kwiMacOS
Ukuba uhlala ufuna ukutshintsha ubungakanani beempawu kwi-bar esecaleni, kweli nqaku sikubonisa ukuba singakwenza njani ngokukhawuleza kwaye ngendlela elula kakhulu.
URalph Lauren ubhengeza ukusayinwa kuka-Angela Ahrendts kwiBhodi yaBalawuli
UTim Cook wabhengeza ukuqeshwa kuka-Angela Ahrendts, ngo-Okthobha ophelileyo u-2013, owayengu-CEO ...
Ungazikhubaza njani oopopayi kunye nokuhanjiswa kwezinto kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra
Ukuba senza uopopayi kunye nokukhanya kweekhompyuter zethu kulawulwa yi-MacOS High Sierra, ukusebenza kwayo kuya kukhawuleza.
Ikhaya leGoogle kunye neMini yasekhaya iya kufika eSpain kulo nyaka wonke, njengeAmazon Echo
Yonke into ibonakala ibonisa ukuba ukhuphiswano luza kuba phambili kwe-Apple kwakhona kwaye izithethi zokuqala ezivela kuGoogle naseAmazon ziya kufika eSpain ngaphambi kweKhaya leKhaya lakwa-Apple.
Okokugqibela Sika Pro X iyasilela ukuphumelela eHollywood njengomhleli wevidiyo
I-Final Cut Pro X ayiphumeleli kwi-Hollywood njengo-Avid's Media Composer. Ukuziqhelanisa nefilosofi yakhe kubonakala sesona sizathu siphambili.
ICondé Nast yokupapasha iqela iyala intengiso enokwenzeka kwiApple
Iqela elipapashayo uCondé Nast liyaphika ukuba lizimisele ukuzithengisa kwi-Apple, ngoku okanye kwikamva, nangona ikamva liyinto enokuthethwa ngaleyo nto.
Uyenza njani into yokuShiya iMeyile kwiiakhawunti ezingezizo ze-ICloud
Ngaba uyafuna ukusebenzisa inkonzo yokuThumela iMeyile kwiiakhawunti ngaphandle kwe-iCloud? Apha sikubonisa ngamanyathelo ambalwa wokwenza kusebenze ukhetho usebenzisa i-imeyile ye-macOS
UBill Gates uthi iApple yinkampani emangalisayo
Omnye wabadlali abakhulu be-Apple kwiminyaka yakhe yokuqala yayinguMicrosoft. UBill Gates, umseki weMicrosoft utyikitye ukuba iApple yinkampani emangalisayo.
Abanye abasebenzisi be-Apple Watch bafumana izimemo kwi-Apple Heart Study
Abasebenzisi ababhalisele i-Apple Heart Study ehlelwe yiYunivesithi yaseStanford bafumana izimemo zabo zokuqala ze-imeyile.
I-HomePod iya kuba nakho ukulawula ikhalenda yethu ngohlaziyo lwe-iOS olulandelayo
Phakathi kweenkcukacha abanye abaphuhlisi beebas zokuqala ze-iOS 11.4 abazifumeneyo, sifumana ithuba lokuba sikwazi ukulawula ikhalenda yethu.
Ulawulo lweqela lukhokelela kwiCardhop, kunye nohlaziyo lwayo lokuqala
Umphathi woqhakamshelwano lweCardhop uhlaziywa kwinguqulelo 1.1 ngophuculo kulawulo loqhakamshelwano olukrelekrele kunye nokufakwa kweelwimi ezintsha.
Izabelo zeapile ziyanda kwaye zaphula irekhodi labo: $ 186,88 ngesabelo ngasinye
Ngaphandle kwamathandabuzo oku luphawu olucacileyo lokuba iApple iyayonwabela impilo yentsimbi kwaye ...
Ividiyo isivumela ukuba sibone ngaphakathi kwipaki yemoto iApple Park
Sifumana ividiyo entsha yeApple Park, ikomkhulu elitsha leApple. Nangona kunjalo, ngeli xesha yividiyo engaphakathi kwipaki yemoto
Iziphumo ezinomdla kubadlali bebhola abasebenzisa i-Nvidia eGPUs kwi-macOS
Siyasazi isisombululo esingekho mthethweni sokusetyenziswa kweeNvidia eGPUs ezikwisigaba seAlfa. Ukuqaqambisa ukulula kunye nokusebenza ngokubanzi.
Amabala amatsha okhuseleko e-Intel asendleleni
I-Intel iqinisekisile kuthi ukuba iyasebenza kwiipaki zokhuselo ukulungisa ukungaphumeleli ngakumbi koyilo lweChips, into efana neepaki zeSpecter neMeltdown
Ungayitshintsha njani indawo yeefayile ezikhutshiweyo kwi-iTunes
Ngaba uyafuna ukutshintsha indawo apho konke ukhuphelo olwenzileyo ngokusebenzisa i-iTunes kugcinwa? Sichaza indlela yokwenza ngamanyathelo alula kakhulu
Iibasas ezintsha zeMacOS, iMacBook lag, ukwandiswa kweApple Pay, nokunye okuninzi. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Iveki emfutshane kuninzi ukusukela ukuba ezinye iiholide zidlulile kwaye sibuyele ngeCawe. Oku…
Isenzo se-Apple siyabuya ukumakisha ubuninzi, emva kokuba iziphumo zinikiwe
Isitokhwe sika-Apple asikayeki ukukhula ukusukela oko kwaboniswa iziphumo zekota, apho baphule khona iirekhodi zenzuzo. UWarren Buffett uyavuma ukuba ubhejo olukhulu kwi-Apple
IMercedes-Benz A-Class 2018 iya kuba neCarPlay engenazingcingo kwinkqubo yayo yemultimedia
I-A-Class entsha ye-2018 evela kwiMercedes-Benz yaseJamani iye yahlaziya inkqubo yayo yemultimedia edibeneyo. Kwaye le ngoku ixhasa iApple CarPlay engenazingcingo
Kusele inyanga enye ukuya kwi-WWDC 18 ephambili, sinokulindela ntoni kuyo?
Sisondele ngenene kwinto eyakuba ligama eliphambili elisemthethweni lika-Apple ukuba sithathela ingqalelo intetho ...
Abasebenzisi bacela iApple ukuba ithathe indawo yezitshixo ezingaphumeleli zeMacBook Pro
Umsebenzisi ufake isicelo kuTshintsho.org kwiApple ukuba ithathele ingqalelo ukubuyisela endaweni yezitshixo zebhabhathane ezingalunganga kwiMacBook Pro
Imveliso iqala ngo Ngaba ulele uthotho lweenkwenkwezi u-Octavia Spencer
Ukuveliswa kolunye uthotho lwe-Apple, Ngaba Ulele sele uqalile isigaba semveliso, uthotho lweqonga lomlingisi u-Octavia Spencer
Ungayitshintsha njani ubungakanani beefoto zakho kunye noPhononongo kuqala
Olunye ukhetho olunikwa nguPreview, siyifumana kubanakho ukutshintsha ubungakanani beefoto kunye.
Lawula okwenzekayo ngasemva, kunye neLingon ye-macOS
ILingon sisicelo esikuvumela ukuba wazi kwaye ulawule zonke iinkqubo ezenzeka ngaphakathi kwe-macOS, ukuqhubeka nokwenza inkqubo.
Zama umhleli wokubhaliweyo wokubambisana, ngokusekwe kuMarkdown
Ukubetha sisicwangcisi esilula kunye nesicwangcisiweyo somhleli wombhalo, kodwa inezinto onokukhetha kuzo eziphambili zeprosesa njengeMarkDown
IPodcast 9 × 30: Ukungaphumeleli kwe-Apple, kodwa hayi eyokugqibela
Kule veki ngoLwesibini ebusuku kube nzima kuthi kwaye sidlulise #podcasapple ukuya ngoLwesithathu kodwa njengoko usazi phantse ...
I-Spotify ifikelela kubabhalisi abazizigidi ezingama-75
Ifemu yaseSweden ibhengeze nje amanani amatsha enani labasebenzisi abahlawulwayo kunye nohlobo lwasimahla, abafikelela kubasebenzisi abazizigidi ezingama-75.
Iibhanki ezintsha ziyahambelana neApple Pay eOstreliya, eMelika, eTaiwan ...
Abafana abavela eCupertino bandise inani leebhanki kunye namaziko emboleko ahambelana netekhnoloji yokuhlawula ngaphandle kwamacingo ka-Apple, iApple Pay
INorway, iPoland neUkraine ziya kufumana iApple Pay ngaphambi kokuphela konyaka
Njengoko uTim Cook ngokwakhe ebhengezile, kwinkomfa yeziphumo zoqoqosho, iNorway, iPoland neUkraine iya kuba ngamazwe alandelayo aza kufikelelwa yiApple Pay.
Ukusuka kwi-TV ye-Apple unokulawula nokubhaliselwa kwaye yenziwa njalo
Ngaba uyazi ukuba imirhumo oyithengileyo nge-ID yakho ye-Apple inokulawulwa nge-Apple TV? Apha sichaza ukuba kulula kangakanani
Izithuthi ze-Apple Maps, ezikhoyo kumazwe angaphezu kwe-10
Izithuthi ze-Apple ziyaqhubeka nokuqokelela idatha ngekamva le-Apple Maps. Olu lwazi ngokuqinisekileyo luya kusetyenziswa kwiimephu ze-macOS elandelayo.
U-Apple upapasha iziphumo zezemali kwikota yesibini yonyaka-mali
U-Apple usebenze izolo kwaye wasinika iziphumo zemali esizifumene kule kota yesibini ...
I-beta yesithathu ye-tvOS 11.4 kunye ne-watchOS 4.3.1 ngoku ziyafumaneka kubaphuhlisi
Abafana abavela eCupertino basungule kunye ne-beta yesithathu yabaphuhlisi be-macOS 10.13.5, i-beta yesithathu ye-tvOS 11.3 kunye ne-watchOS 4.3.1
I-beta yesithathu ye-macOS 10.13.5 yabaphuhlisi ngoku iyafumaneka
I-beta yesithathu ye-macOS 10.13.5 sele ikho, nangona okwangoku, kuphela kubaphuhlisi, nangona kunokwenzeka ukuba ngalo lonke usuku kuya kukhutshwa ingxelo yabasebenzisi be-beta yoluntu.
I-Apple inokuba nomdla ekuthengweni kweqela elipapashayo uCondé Nast
I-Apple inokuba nomdla wokuthenga inxenye okanye zonke iintloko zeqela lokushicilela leCondé Nast, elingahambi kwelinye lawona maxesha alo mahle.
Fumana ukuba umntu othile usebenzisa iMac yakho ngesicelo sokungaphazamisi
Ngesicelo sokungaphazamisi, sinokwazi ukuba umntu othile uzama ukufikelela kwizixhobo zethu ngobuqhetseba, phambi kwekhompyuter.
Ividiyo entsha yedrone yeApple Park enika umbono omangalisayo
Enye ividiyo entsha ivele kwi-YouTube apho sinokubona khona, ngokweenkcukacha ezinkulu, ukuba ugqibezele ngokupheleleyo njani umsebenzi we-Apple Park.
Kutheni ndingaboni ezinye zemirhumo yam kwi-iTunes
Kunokwenzeka ukuba awuyi kubona yonke imirhumo yakho kwi-iTunes. Sikuxelela ukuba ngoonobangela bokuzibona kwabo kuluhlu lwakho
UPalo Alto Apple ukuphucula, ukwandiswa kweKhayaKit, uTim Cook kunye noDonald Trump, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Njengayo yonke iCawa, sifika kunye nokuhlanganiswa okutsha kweendaba ezithandwayo zeveki eziphela namhlanje. Ngokuqinisekileyo ngomso ...
Ivenkile yeApple yeLehigh iya kwindawo enkulu
Ukufuduswa kweVenkile yeLehigh Valley kucwangciselwe i-2018. Ngeli xesha, bafudukela kwenye indawo ukubonelela ngendawo yokugcina.
IFarrago, isicelo sePodcasters, sihlaziywa ngokongeza iMowudi emnyama
I-Farrago, usetyenziso lweePodcasters, ibisandula ukuhlaziywa ngezinto ezintsha, kubandakanya imowudi emnyama.
I-Lexus sedan sele ineApple CarPlay kwiscreen sayo esingu-12,1 ″
ICarPlay iyafana kakhulu neApple Pay, ukuhanjiswa kwayo kunye nokwaziswa kwayo kuhamba kancinci kuninzi ...
I-32Gb RAM MacBook Pro ayizukufumaneka de kube ubuncinci ngo-2019
I-Intel ibhengeza ukulibaziseka okutsha kwiprosesa ye-10nm Cannon Lake, eya kuthi ngokuqinisekileyo ibambe iiMacBook Pros zexesha elizayo kwaye iya kuvumela ukunyusa i-32GB ye-RAM
Uyikhuphela njani ikopi yayo yonke idatha u-Apple ayaziyo ngawe
Ngaba uyafuna ukukhuphela idatha eqokelelwa yi-Apple malunga nawe? Sichaza, inyathelo ngenyathelo, indlela ekufuneka uqhubeke ngayo
UTim Cook ufumene intlanganiso e-White House iluncedo
Igosa eliphezulu kulawulo lukaTrump, uLarry Kudlow, uphawule ngodliwanondlebe oluhle phakathi kukaCook noTrump. KuTim Cook intlanganiso ibiluncedo.
Icandelo lobuchule liyaqhubeka nokukhetha izixhobo zeMacOS kunye neze-iOS
Isifundo sentengiso iJamf, sikhuphe nje amanani engxelo yonyaka kwaye kule nto uyabona ...
I-Sonos Yazisa ngokusesikweni ukuba yeyiphi i-AirPlay 2 ehambelana neemveliso eziya kubakho
Kwiinyanga ezi-7 emva kokubhengeza ukungqinelana kweemveliso zayo ne-AirPlay 2, inkampani ye-Sonos iqinisekisile ukuba yeyiphi imveliso eya kuhambelana nale teknoloji ye-Apple.
Ungakukhubaza njani ukuzenzekelayo kwi-macOS
Ngaphezulu kwesihlandlo esinye, ukukhubaza ukulungiswa kwe-macOS kunokuba yeyona ndlela ilungileyo xa isilungisi singayeki ukuguqula yonke into esiyibhalayo.
Uyilungisa njani imirhumo ye-Apple kwi-Mac yakho nge-iTunes
Ngaba uyafuna ukufunda indlela yokulawula imirhumo iTunes? Apha sikushiya isifundo esincinci esiza kukuvumela ukuba wazi ukuba mangaphi amrhumo asasebenza, ungazikhuphi okanye ungazihlaziya
Ngaba kufuneka iMac mini, iAirPort, kunye nePod Touch ihambe?
Isixa semveliso esisifumana kwikhathalogu ye-Apple namhlanje sikhulu kakhulu kwaye si ...
Uyifumana njani inombolo ye-serial yeMac
Ukwazi inombolo ye-Mac yethu kungasivumela ukuba sazi ngokukhawuleza kungekuphela nje imeko yewaranti yeMac yethu, kodwa ikwavumela iApple ukuba yazi zonke iinkcukacha ngezixhobo zethu.
China etafileni kwintlanganiso kaTrump-Tim Cook
Iinkcukacha malunga nentlanganiso kwiOval Office phakathi kukaMongameli wase-United States, uDonald Trump, kunye ne-CEO ...
I-BBVA kunye neBancaMarch ibhengezwe ngokusesikweni kwi-Apple Pay
Kwaye ezinye ezimbini ezongezwe kwi "Kuza kungekudala" yeApple Pay, iBBVA kunye neBancaMarch sele ivele kwicandelo lewebhu le ...
Kungekudala iApple iza kuqala ukuhlawula isohlwayo sezigidi esizibekwe yi-EU
I-Apple izakuqala kwinyanga ezayo ukujongana nesohlwayo esinyanzelwe yi-EU kunyango lwenzuzo ye-Ireland yokufaka irhafu encitshisiweyo.
Yazi inqaku lokushiya inqaku le-macOS ngaphambili
Funda ngendlela yokuqaqambisa inowuthi ngaphambili ukuze ihlale ibonakala okanye uthathe amanqaku. Inokwenziwa ngamanqaku amaninzi ngaxeshanye.
Kwiveki enye, iqela leSoy de Mac kunye ne-iPhone Actualidad lidibene ukuze lithethe ngezona ndaba zibalulekileyo zeentsuku ezi-7 zokugqibela ezinxulumene neApple kunye netekhnoloji ngokubanzi.
UTim Cook noDonald Trump, baya kudibana kwakhona namhlanje e-White House
Kwakhona, i-CEO ye-Apple kunye nomongameli we ...
E-UK, iApple ishenxisa ukhetho lwezemali
Uninzi lwabasebenzisi beApple bajonge kumba wemali yemveliso ngokungahlawuli yonke ...
U-Apple uhlawula ngaphezulu kwesigidi seedola kwi-documentary ngobomi buka-Ed Sheeran
Ekupheleni konyaka ophelileyo, iqabane lam uJordi likuxelele ngeengoma ezimanyelweyo kakhulu ngenkonzo ...
Ikopi yoqobo yentengiso ye-Apple ye-beta ka-1984 inyukela kwifandesi
Ifandesi yamva nje yemveliso enxulumene neApple, sayifumana kwikhasethi yoqobo yevidiyo ka-1984 yeApple kwifomathi yeBetamax
I-Prizmo 3.5 iya kuphucula ukubonwa komlinganiswa we-OCR
I-Prizmo sisifundi sombhalo se-OCR esiphuculisa i-injini yayo yokufumanisa kule nguqulo 3.5. Iyafumaneka ngeelwimi ezili-18 kwaye yenzelwe abalinganiswa abakhoyo ngoku.
Uzivula njani ngokukhawuleza izixhumanisi ezivela kwindawo ebonakalayo
Ukubekwa esweni sisixhobo esinamandla esikuvumela ukuba usebenze kakuhle ngakumbi ngeMac yakho.Kweli xesha siza kuchaza indlela yokuvula ngokukhawuleza amakhonkco ngesi sixhobo
Ungayikhubaza njani kwaye uyicime ikuki kwi-Safari
Ukuba udiniwe kukubona indlela isikhangeli sakho esazi ngayo malunga nembali yokukhangela kunawe, lixesha lokuba ucime ikuki kwisikhangeli sethu.
I-European Union iqala ukuphanda ukuthengwa kwe-Shazam ngu-Apple
I-European Union iqale uphando malunga nokuthengwa kwe-Shazam ngu-Apple, ukubona ukuba inkampani esekwe eCupertino ibeka phambili i-Apple Music ekonakaleni kwezinye iinkonzo zomculo zokusasaza.
Iimveliso zeAqara zeXiaomi ziya kongeza iKhayaKit kulo nyaka
Kulabo abangaziyo, iAqara luphawu lweemveliso zasekhaya kwaye iphantsi kwesambrela ...
Ivenkile yePalo Alto Apple nayo iya kufumana uphuculo
I-Apple igcina kwihlabathi liphela ziyatshintsha ngokulungiswa kunye nokuphuculwa okukhulu. Kule veki u-Apple ubhengeze into emangazayo ...
I-MacOS inokhetho lweMifanekiso kodwa ikhubazekile
Ukukhetha ukucofa kwe-iOS kukwi-macOS kodwa kukhubazekile. Ukuyisebenzisa kufuneka uye kwiiNkqubo ezikhethwayo zoLwandiso.
I-FFmpeg 4.0 ifumana inkxaso yamakhadi emizobo
Uhlaziyo lweFFmpeg kuhlobo lwe-4 lusizisela ii-H.264 zokufaka iikhowudi ukuya kuthi ga kuma-7 ngokukhawuleza, enkosi ekusebenziseni imizobo endaweni yeprosesa.
Uyifihla njani i-IP
Sikunika iindlela ezizezinye zokufihla i-IP kwi-Mac. Ezi ndlela zisebenzisa iiproksi, iiVPNs okanye izikhangeli ze-intanethi ezinokhetho olunomdla oluya kukuvumela ukuba ukhangele ngasese kwaye ngaphandle kokushiya umkhondo.
Ukuba ungomnye wabo batshintsha iodolo yeediski ngokungacwangciswanga, yazi ukuba ungayiphepha
Enye yeengxaki endiphakanyiswe ngumntu endisebenza naye ngale ntsasa malunga neodolo ...
Uyifaka njani iJava kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra
Kwiinguqulelo zamva nje ze-macOS, iApple isuse inkxaso yeJava ngokwendalo, ke kufuneka siye kwiwebhusayithi yeOracle ukukhuphela isoftware yeJava ukudlala umxholo owenziwe ngolu lwimi.
I-Pilot yeposi ilungiselela uguqulelo 3 ngeendaba ezibalulekileyo
I-Mail Pilot ikwisigaba se-beta senguqulelo 3. Umphathi weposi osivumela ukuba songeze imisebenzi kwiinkqubo, iza nezinto ezintsha ezibalulekileyo.
I-Apple ibhiyozela uSuku loMhlaba ngokusebenza kukaZiggy Marley
U-Apple uququzelele iBeer Bash ukubhiyozela uSuku lweHlabathi loMhlaba apho amagcisa ahlukeneyo, kubandakanya uZiggy Marley, athe athatha inxaxheba.
I-Apple Pay, iMacOS beta 2, uSuku loMhlaba, kunye nokunye. Eyona veki ibalaseleyo ndivela eMac
Inyanga iyaphela kwaye singena kwiveki yokugqibela ka-Epreli. Into elungileyo kukuba…
Ukuxabiswa kweeMacs eziphathwayo kuyawa, ngokophando
IiMacs eziphathwayo ziwela kumaxabiso, ngokophando olwenziwe yiLaptop Mag.Ukungabikho kwezinto ezintsha, kubandakanya nescreen sokuchukumisa, isitshixo kumaxabiso.
Isaphulelo se-Apple Watch okanye i-SSD drive phakathi kwee-eBay zeSuper Weekend
Ngaphandle kwamathandabuzo, kufuneka siqwalasele izibonelelo esinokuthi sizifumane kumnatha nakwi-com ...
UMyili we-Icon yeMacintosh uSusan Kare, Ophumeleleyo kwiBhaso lokuPhila ngeXesha lokuPhila
USusan Kare, umyili we-icon ye-Mac yakudala, uwongwe ngomsebenzi wakhe wonke, umsebenzi omkhokelele kwiinkampani ezinkulu zobuchwephesha.
Fumanisa ukuba ngaba iakhawunti yakho ye-imeyile igqekeziwe ngenxa yombuzo "ngaba ndibetyiwe?"
Ngaphandle kwamathandabuzo, kunokuba kunokwenzeka ukuba enye yeeakhawunti zakho ze-imeyile yafumana ingxaki ngexesha elithile ...
Ukuphucula okusingqongileyo, isitshixo kwingxelo yoxanduva lokusingqongileyo kuka-Apple
I-Apple iyazingca xa isenza nganye yeeprojekthi zayo kwaye inceda ekuphuculeni umkhondo wendalo. Ingxelo yenkampani yezeNdalo ibandakanya amanyathelo aliqela.
Ukuvavanywa nge-macOS 10.14 kunye ne-iOS 12 kuyaqina
Njengoko sele sisazi xa iinguqulelo ezintsha ze-Apple OS zisondela, inkampani iqala ukuzisebenzisa ukusuka ...
Ukudibanisa i-macOS kunye ne-iOS akukho kwizicwangciso zikaTim Cook
UTim Cook uqinisekisile kudliwanondlebe lwakutsha nje ukuba akacwangcisi ukudibanisa iiMacOS kunye ne-iOS, njengoko bobabini behambelana. Siza kubona ukuba kwenzeka ntoni ngenkqubo yeMarzipan yokuhlanganiswa kwezicelo zeenkqubo ezimbini.
U-Liam, irobhothi ye-Apple sele ineqabane kwaye igama lakhe nguDaisy
I-Robot entsha yokuqhaqha i-Apple, iDaisy, yeyona ndlela isebenzayo yokufumana izinto zexabiso ezigcinwe ...
Windows Defender iza kwiChannel ukukhusela iMac yethu
Abafana abavela eCupertino baqalise ulwandiso lweWindows Defender ukuze nawuphi na umsebenzisi weChannel akhuselwe ngalo lonke ixesha usebenzisa iMac
Fumana iphasiwedi ye-Wi-Fi ngenxa yesicelo se-Keychains kwi-Mac yakho
Isifundo ngendlela yokufumana kwakhona iphasiwedi ye-Wi-Fi ngoncedo lwesicelo seMacOS Keychains ngamanyathelo ambalwa alula
Ngenye iveki sizisa isahluko esitsha se # podcastapple yethu kwaye kule veki besijonge phambili emva kwesibini ...
Izinto ezi-3.5 zilapha, ukuqhubeka nokuphucula ulawulo lomsebenzi
Izinto zifikelela kuhlobo 3.5 ukongeza imisebenzi emitsha enjengemisebenzi yekopi kunye nokwenza umsebenzi ngomgca ngamnye okanye ukwenza ngokwezifiso iimenyu